» अनुहार विनाको बच्चा जन्मिएपछि डाक्टर निलम्बित
०३ असोज २०७८
अनुहार विनाको बच्चा जन्मिएपछि डाक्टर निलम्बित
१८ मंसिर २०७६, बुधबार ०७:०१
अनुहार विनानै बच्चा जन्मिए पछि पोर्चुुुुगलमा प्रशुतीसम्बन्धि एकजना डाक्टर निलम्बनमा परेका छन् । आफ्नो छोरा नजन्मिदासम्म आमाबाबुले जानकारी नै पाएनन् कि शिशुको अनुहार नै छैन ।
रोष्ड्रगो नामको शिशुका आमाबाबुले पछि मात्र यो विषय थाहापाए । त्यसपछि उनीहरु स्तब्ध भए । निलम्बनमा परेका डाक्टर आर्तर कारभालोलाई हेलचक्य्राइँको अभियोग लगाएर निलम्वन गर्न त्यहाँको मेडिकल काउन्सिलका अधिकारीहरुले निर्णय गरेका थिए ।
के भएको थियो शिशुलाई
रोड्रिगोको जन्म अक्टोबरमा भएकोे थियो । शिशुका आमाले गर्भवती भएका बेला डाक्टर कारभालोको निजी क्लिनिकमा तिनपटक अल्ट्रासाउण्ड गराएकी थिईन् । तर, गर्भमा रहेको बच्चाको अवस्थाको बारेमा केही भनेका थिएनन् । रोड्रिगोकी आमाले ६ महिनाको गर्भ हुदा चौथोपटक अर्कै क्लिनिकमा उच्चस्तरको ‘फाइभ डी ’ अल्ट्रासाउण्ड गराएकी थिइन् ।
उक्त जाँचमा भने बच्चामा केहि शाररिकि कमजोरीको विषय उठाइएको थियो । त्यसबारे डाक्टर कारभालोलाईसंग कुरा गर्दा त्यति ठुलो समस्या नभएको र कतिपय बेला बच्चाको टाउको आमाको कोखमा टासिने हुनाले अल्ट्रासाउन्डमा अनुहार देखिदैन भनेका थिए ।
ती शिशु जन्मिए पछि केहि समय मात्र बाच्ने भनिएपनि दुई साता भन्दा धेरै अस्पतालको निगरानीमा बाँचेको छन । उक्त शिशुको बुबाआमाले पोर्चुगलको अभियोजनकर्ताको कार्यालयमा डाक्टरविरुद्ध उजुरी दिएको पनि छ । ती डाक्टर विरुद्ध २०१३ यताको कम्तीमा ६ वटा उजुरी परिसकेको छ र अनुसन्धान अघि बढिससकेको छ ।
एकै मण्डपमा चन्दुले गरे दुई प्रेमिकासँग विवाह !
मध्य प्रदेश : गाउँका मुखियालाई गधा चढाएर आर्यघाट पठाइयो
एउटा देश जहाँ छैन एउटै एटिएम, लिन पाइँदैन सिम कार्ड
३१ औंला भएकाे बच्चा
जो आफ्नै मृत्यु दर्ता खारेज गर्न अड्डा धाउँदै छन्
अनौठो कानून : जहाँ मुसा पाल्न पनि सरकारको अनुमति चाहिन्छ !
बागमती प्रदेशमा “शुसासन तथा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम’’ तत्काल ल्याउँछौं–मुख्यमन्त्री शाक्य
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संविधान दिवसकाे शुभकामना व्यक्त
मनसुन निस्क्रिय : मनसुनी अवधिको समय परिमार्जन
इन्द्रजात्राको दोस्राे दिन आज कुमारी रथयात्रा हुँदै
इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर सिटी साउथह्याम्पटनसँग बराबरीमा राेकियाे